Free Blog ဖန်တီးရန် အကောင်းဆုံး ဆိုက်များ | Do
Free Blog ဖန်တီးရန် အကောင်းဆုံး ဆိုက်များ	This entry was posted on August 3, 2012, in နည်းပညာ ပို့စ်များ and tagged free blog. Bookmark the permalink.	2 Comments
Free Blog ဖန်တီးရန် အကောင်းဆုံး ဆိုက်များ
အခု ကျနော့်ရဲ့ domyanmar.wordpress.com ဟာ WordPress ပေါ်မှာ အခြေတည်ထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကို WordPress.Com မှာ Free တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာနက် တစ်ခွင်မှာလည်း Free Blog တည်ဆောက်ခွင့် ပေးထားတဲ့ Site တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိတဲ့ ဆိုက်အချို့ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
လိပ်စာက – http://wordpress.com/
Google ရဲ့ Free Blog ပေးတဲ့ ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail အကောင့်နဲ့ လွယ်လင့်တကူပဲ ဆောက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သူပေးတဲ့ free blog address ကတော့ xxxx.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက – http://www.blogger.com/
ဒီနေရာမှာလည်း Free Blog တစ်ခုကို တည်ဆောက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Blog.Com ဟာလည်း Free blog ဆားဗစ် ပေးတဲ့ ဆိုက်တွေထဲက အကောင်းဆုံး တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ သူပေးတဲ့ blog address ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လိပ်စာက – http://blog.com/
လိပ်စာက – http://blogsome.com/
အခု ဒီ Weebly.Com ကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ အများစုနဲ့ ရင်းနှီးမှု ရှိပါတယ်။လိပ်စာက – http://www.weebly.com/
လိပ်စာက – http://blogetery.com/
လိပ်စာက – http://www.webs.com/
လိပ်စာက – http://www.blogster.com/
လိပ်စာက – http://www.moonfruit.com/
လိပ်စာက – http://www.thoughts.com/
လိပ်စာက – http://www.lifeyo.com/
လိပ်စာက – http://www.inube.com/
အထက်က Free Blog တွေရဲ့ ဘယ်လို တည်ဆောက်ရတယ် ဆိုတာကို မသိသူတွေ၊ အတွင်းပိုင်းကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို မသိသူတွေအတွက် နောက်များအခါမှာ ရေးသားပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
2 thoughts on “Free Blog ဖန်တီးရန် အကောင်းဆုံး ဆိုက်များ”	Oklahoma City rehabilitation alcohol medicine says:	January 27, 2014 at 1:08 pm	My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
Reply	charlotte drug rehab says:	January 27, 2014 at 7:36 pm	Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate!
« English စာလုံးတွေနဲ့ Google မှာ ရှာကြည့်တဲ့အခါ	အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပုံရှာနည်း – ၁ »